Sei zvakashata kudya zvose zvakakangwa? Sei zvakashata kudya zvose zvakakangwa? 2021-10-23 19:01:04	Power supply Olga Sologub Sei zvakaipa kudya nyama yakakangwa? Chinhu chinonyanya kukosha ndechekuita nyama yakakangwa. Kana kufinya, kusanganisira pamusoro pemarasha, makomisheni anoumbwa, ayo mune yakakwira dosi ... Verenga
Sei uchida ganache? Sei uchida ganache? 2021-10-23 19:01:04	Power supply Olga Sologub Nei kudzikamisa ganache? Kana iyo stranified ganache ichibvumidzwa kudzikama, saka haizove neyakagadzika magadzirirwo, asi iyo yakakora nekuda kwekusakwana kwakapararira kwemafuta (mafuta zvikamu zvakare ... Verenga
Mubvunzo: Unofanira kubheka riini Easter 2022? Mubvunzo: Unofanira kubheka riini Easter 2022? 2021-10-23 19:01:04	Power supply Olga Sologub Unofanira kubika rini Easter? Maererano netsika, itsika kubika pasita neChitatu, Maundy China neMugovera. Kana makeke eIsita akabikwa neChitatu achikwanisa kurasikirwa nehuswa hwavo nezororo ... Verenga
Mhinduro yepamusoro Mhinduro yepamusoro 2021-10-23 19:01:04	Power supply Olga Sologub Unofanira kutora mazai kwenguva yakareba sei? Dururira mazai mugango rinopisa (chengeta ndiro yacho padyo nepadenga repani). Fry mazai kweminiti imwe pamusoro pekupisa kukuru. Ipapo moto ... Verenga
Ini ndinofanira here kuwedzera mazai pachingwa? Ini ndinofanira here kuwedzera mazai pachingwa? 2021-10-23 19:01:04	Power supply Olga Sologub Ndeapi mazai mune mbiriso mukanyiwa? Mazai anowedzerwa kuti awedzere hupfu nemapuroteni uye mavitamini; zvinhu zvakabikwa zvinonaka uye zvine hutano. Saka kuti mapai nemabhanzi arege ... Verenga
Mubvunzo wako: Ungachengeta sei bharisamu muto? Mubvunzo wako: Ungachengeta sei bharisamu muto? 2021-10-23 19:01:04	Power supply Olga Sologub Nzira yekuchengetedza bharisamu cream? Chengetedza pane tembiricha kubva -5'C kusvika + 30'C uye hunyoro hune hukama hwe75%. Chengeta bhodhoro mufiriji mushure mekuvhura. Nzira yekuchengetedza bharisamu vhiniga ... Verenga
Kwazisai, vanodikanwa vezvekudya. Iwe unofarira mbabvu dzakanyoroveswa uye dzakabikwa kana kubikwa muchoto? Ndine chete ... Verenga
Maitiro ekubika yakabikwa nyama yenguruve mbabvu mu teriyaki marinade - nhanho nhanho recipe nemufananidzo 2017-11-13 12:07:25 Recipes
Omelet pane puff pastry muchoto Maitiro ekubika omelette yepakutanga pane puff pastry muovheni yekudya kwemangwanani - nhanho nhanho recipe 2017-09-28 11:53:16 Recipes
Kwazisai, zvangu zvinoshamisa gourmets. Ndiudze, unofarira kudya kuri nyore kugadzira here? Ini ndaive nerudo rwakadai rwekukurumidza kubika ndakazviratidza apo mwanakomana wangu paakatanga kufamba. Verenga
Huku zvidya zvine orenji uye ndimu Maitiro ekubika huku mahudyu neorenji uye ndimu muchoto - nhanho nhanho nzira ine pikicha 2017-09-15 12:08:35 Recipes
Kwaziso, vanoda zvinonaka uye zvinonaka. Ini ndinofunga haungarambe kuti shiri inofamba zvakanaka nemichero nema berries. Zvakanaka, semuenzaniso, siginecha dhishi remutambo wemafaro ... Verenga
Maitiro ekubika ratatouille nenzira kwayo Maitiro ekubika ratatouille nenzira kwayo - nhanho-nhanho kosi yekubheka ine miromo-yekudiridza mafoto 2017-09-11 11:57:48 Recipes
Mhoro vadikani vangu shefu. Munguva pfupi yapfuura ndakatarisa iyo katuni "Ratatouille". Ngano yakanaka yekuti chero chaunoda zvinogona kuzadzikiswa kana iwe ukasakanda mapfumo pasi. Iva nehope -… Verenga
Potato casserole nechizi Kubika inonaka mbatatisi casserole nechizi - nhanho nhanho nzira ine pikicha 2017-09-04 12:01:10 Recipes
Kwazisai, vanodikanwa vezvekudya. Ndakaona kuti shamwari dzangu zhinji dzinosanganisa casserole ne curd pie. Pamwe nekuti cottage cheese casseroles yakanyura mumweya, iyo ... Verenga
Braised cabbage mupani
Cheese waffles mune yemagetsi waffle iron - nhanho nhanho resipi ine mufananidzo
Nyore Huku Pea Soup - Culinary Recipe
Quick pickled kabichi
Cheese donuts - nyore nhanho nhanho mabikirwo ane mafoto
Chii chokubika mu blender?
Nhasi mukicheni unogona kuwana boka rezvinhu zvinobatsira.
Kudya kwaDucan, danho rechipiri "Cruise"
Kudya kwaDukan 2 nhanho - musimboti weiyo "alternation" chikamu, ...
Kudya Minus 60 - menyu yevhiki
Nzira yekuderedza uremu iyo inobvumidza iwe kuti usafe nenzara. Kudya Kunobvisa makumi matanhatu ...
Kudya kweDukan - matanho nemamenyu
Chii chinonzi kukosha kwechikafu chevaDukan, icho ...
Vakakurumbira vadyiri mbishi munyika
Ivo vanonyanya kuzivikanwa mbichana vadyi munyika vanogovana zvavakaona zvavo ...
Zvimwe nezve chikafu
Mubvunzo: Unofanira kubheka riini Easter 2022? Mubvunzo: Unofanira kubheka riini Easter 2022? 2021-10-23 19:01:04 Power supply Olga Sologub Unofanira kubika rini Easter? Maererano netsika, itsika kubika pasita neChitatu, Maundy China neMugovera. Kana makeke eIsita akabikwa neChitatu achikwanisa kurasikirwa nehuswa hwavo nezororo ... Verenga
Mubvunzo wako: Ungachengeta sei bharisamu muto? Mubvunzo wako: Ungachengeta sei bharisamu muto? 2021-10-23 19:01:04 Power supply Olga Sologub Nzira yekuchengetedza bharisamu cream? Chengetedza pane tembiricha kubva -5'C kusvika + 30'C uye hunyoro hune hukama hwe75%. Chengeta bhodhoro mufiriji mushure mekuvhura. Nzira yekuchengetedza bharisamu vhiniga ... Verenga
Sei uchida ganache? Sei uchida ganache? 2021-10-23 19:01:04 Power supply Olga Sologub Nei kudzikamisa ganache? Kana iyo stranified ganache ichibvumidzwa kudzikama, saka haizove neyakagadzika magadzirirwo, asi iyo yakakora nekuda kwekusakwana kwakapararira kwemafuta (mafuta zvikamu zvakare ... Verenga
Mhinduro yepamusoro Mhinduro yepamusoro 2021-10-23 19:01:04 Power supply Olga Sologub Unofanira kutora mazai kwenguva yakareba sei? Dururira mazai mugango rinopisa (chengeta ndiro yacho padyo nepadenga repani). Fry mazai kweminiti imwe pamusoro pekupisa kukuru. Ipapo moto ... Verenga
Sei zvakashata kudya zvose zvakakangwa? Sei zvakashata kudya zvose zvakakangwa? 2021-10-23 19:01:04 Power supply Olga Sologub Sei zvakaipa kudya nyama yakakangwa? Chinhu chinonyanya kukosha ndechekuita nyama yakakangwa. Kana kufinya, kusanganisira pamusoro pemarasha, makomisheni anoumbwa, ayo mune yakakwira dosi ... Verenga
Ini ndinofanira here kuwedzera mazai pachingwa? Ini ndinofanira here kuwedzera mazai pachingwa? 2021-10-23 19:01:04 Power supply Olga Sologub Ndeapi mazai mune mbiriso mukanyiwa? Mazai anowedzerwa kuti awedzere hupfu nemapuroteni uye mavitamini; zvinhu zvakabikwa zvinonaka uye zvine hutano. Saka kuti mapai nemabhanzi arege ... Verenga
Zvimwe nezve kudya
Zvese zvawaimboda kubvunza nezve kudya kwaMaggi Zvese zvawakamboda kubvunza nezve kudya kwaMaggi - mhinduro kumibvunzo inowanzo bvunzwa 2018-10-23 14:30:07 Zvokudya Olga Sologub Muunganidzwa wemibvunzo yakajairika nezve nuances yeMaggi Kudya. Kangani iwe unogona kuzvidzokorora, zvekuita kana huremu hwakamira, zvekuita kana hurumende ikatyorwa, chikamu chei chikamu, chii chekuita kana kuomeswa. Miriwo nemichero yakabvumidzwa, ungatsiva sei mazai, rudzii rwehove dzungadya uye kuti doro newaini zvinogona kushandiswa here. Verenga
Izvo zvikafu zvipi zvinosimudzira uremu Ndezvipi zvekudya zvinobatsira kukurumidza metabolism, kupisa mafuta uye kukurudzira kuonda? 2017-12-17 21:18:32 Zvokudya Olga Sologub Kuti uremu hwakawandisa huende nekukurumidza, iwe unofanirwa kudya chikafu chinowedzera metabolism mumuviri wemunhu. Ndeapi achabatsira neizvi? Iwe unogona kuwana runyorwa rwevakanyanya kunaka mune ino chinyorwa. Yakaderera-koriori masobho, zviyo uye miriwo zvakanaka pakurasika uremu nekukurumidza. Mishonga yezvinonhuwira inosanganisawo chikafu - zvinopisa mafuta nekusimudzira kuonda, kunyanya padumbu nemumativi. Verenga
Deredza uremu ne ginger yakanamwa Maitiro ekudzora huremu mushe: is pickled ginger good for weight weight? 2017-11-01 11:59:14 Zvokudya Olga Sologub Waneta nekurwa nekurema? Edza ginger yakasanganiswa kuti uremerwe uremu. Muchikamu chino, takaunganidza matipi anobatsira ekuti ungatora sei ginger, mangani magiramu pazuva, mangani anokandwa kunze, kana akashandiswa nemazvo. Zvakare nzira yekubatsira ye ginger yakasanganiswa kumba, zvakanakira uye zvinokuvadza zvechigadzirwa. Verenga
Izvo zvaunoda kudya kuti uderedze huremu Kudya kwakakodzera uye kurovedza muviri ndiyo kiyi yekuva mutete. Chii chaunoda kudya kuti uderedze huremu? 2017-10-27 11:44:46 Zvokudya Olga Sologub Kurema huremu chinetso chenguva refu munharaunda yanhasi. Mukurwisana nazvo, kurovedza muviri uye kuverenga kwekoriori kunouya kununura. Kubva pachinyorwa chino, iwe unozodzidza nezve izvo zvaunoda kudya kuti uderedze huremu, ndezvipi zvekudya zvaunosarudza, uye kuti kuti uwane mibairo irinani unofanirwa kurovedza muviri nguva dzose, kufamba zvakanyanya, uye kumhanya zvirinani. Verenga
Kudya kwemangwanani kwechipiri kwekudzikira uremu "Kudya kwemangwanani kwechipiri" chimbo chakavanzika chekudzikisa uremu? 2017-10-14 11:57:27 Zvokudya Olga Sologub Vanhu vazhinji vanopokana kuti kudya kwekuseni kwakanaka ndiyo kiyi yezuva rakabudirira. Zvisinei, hazvisi. Zvakanakisa kupatsanura chikafu chako chamangwanani muhafu. Nenzira iyi iwe unowana kukosha kwakawanda. Verenga
Chii chinotyisidzira kugara uchirema Ndedzipi njodzi dzekugara uchirema uye kuti ungawana sei nguva yakakwana 2017-10-12 11:58:59 Zvokudya Olga Sologub Vanhu vazhinji vanoona huremu hwavo. Asi vamwe vanhu vane shungu kwazvo neizvi. Nzira yekuwana iyo yegoridhe zvinoreva? Zviri nyore kwazvo kuti uve neshungu yekutarisa pachiyero Verenga
Zvimwe pamusoro pehusimbe
Kegel kurovedza kwevakadzi Nzira yekuita sei Kegel kurovedza kwevakadzi kumba? 2018-04-02 11:56:23 Kutetepa Olga Sologub Kugunun'una kana kusangana nekutsi kwemukadzi Kegel kurovedza muviri kune mubairo unoshanda. Kubva pane chinyorwa uchadzidza kuti chii, hunyanzvi hwekuita jimunasitikisi nenzira kwayo kune vakadzi kumba, pane chero zvinopesana zvehemorrhoids uye cystitis, zvinoita here panguva yekuenda kumwedzi. Zvakare pamwe nhanho-nhanho-seti yezvidzidzo zvevanotanga uye kurovedza nemabhora. Verenga
Kegel kurovedza kwevakadzi vane nhumbu Maitiro ekuita nenzira kwayo Kegel kurovedza kwevakadzi vane nhumbu uye pane chero zvinopesana here kwavari? 2018-03-30 11:56:22 Kutetepa Olga Sologub Kurovedza muviri kunosanganisira maekisheni eKegel kunobatsira vakadzi vane pamuviri kusvika kumavhiki makumi mana. Zviri nani kutanga kuita maekisesaizi mune yekutanga trimester, asi mabhenefiti anozoonekwa mune yechipiri neyechitatu. Munyaya ino uchawana ruzivo rwekuti ungaita sei jimunasitikisi kumba, ongororo uye zvinopesana. Verenga
Kegel Bhora Gymnastics Yepedyo jimunasitikisi neKegel mabhora: zvazviri uye maitiro ekuishandisa nenzira kwayo 2018-03-28 12:14:18 Kutetepa Olga Sologub Kusimbisa mhasuru yemadzimai kunogonekawo kumba. Kune izvi unoda mazai kana mabhora eKegel. Nzira yekushandisa yakadai simulator? Ngationei kuti ndezvipi, zvavari uye maitiro ekuita maekisesaizi. Muchikamu chino, iwe unowana iwo marayiridzo ekuti ungashandisa sei mabhora, matipi ekuti ungasarudze sei saizi kune vanotanga, maitiro ekuisa uye mashandiro avanoshanda. Verenga
Kufema kurovedza muviri Maminetsi gumi nemashanu pazuva remuviri mutete - kufema maekisesaizi kuita dumbu 2018-03-09 11:58:03 Kutetepa Olga Sologub Kurovedza muviri zvishoma semaminitsi gumi nemashanu pazuva kunogona kutungamira kumhedzisiro. Izvo zvakakwana kugona kugona kufema kurovedza muviri kuti uderedze uremu padumbu. Chii ichochi? Muchinyorwa iwe unowana tsananguro yemuviri waMarina Korpan unoshanduka, jimunastiki yaStrelnikova, jianfei yevanotanga uye makirasi zvinoenderana nehurongwa hweJapan. Iwe unogona zvakare kuverenga wongororo uye wotarisa vhidhiyo inoratidza hwaro hwezviitwa mumaminetsi masere chete. Verenga
Belly Slimming Exercises Iwe unoda kuziva here kuti ndeapi maekisesaizi epanyama ekudzora huremu padumbu, mativi nehudyu zvinonyanya kushanda? 2018-03-07 11:58:05 Kutetepa Olga Sologub Kurovedza muviri kunogona kuitwa kwete mukurovedza muviri chete, asiwo kumba, kugara pachigaro. Muchikamu chino, kushanda kwakanaka kwevarume nevakadzi kunosarudzwa - pa fitball, bodyflex yekufema yakaoma, static bar nevamwe. Dumbbell kurovedza muviri kwekutsvedza dumbu nemativi, chiuno, magaro nemaoko. Verenga
Ndeapi maKegel michina? Chii chinonzi vaginal Kegel varairidzi? Nheyo yekushanda uye mirairo yekushandisa 2018-03-06 11:56:56 Kutetepa Olga Sologub Kune vakadzi, kusimbisa mhasuru dzechiuno zvinogoneka nerubatsiro rweKegel simulators. Chii icho, mashandisiro ebhora uye pane chero zvinopesana - verenga muchinyorwa chino. Zvakare nekuongororwa kwevanachiremba, kusarudza uye kupi kutenga massager akadaro, zvinokwanisika kuti uzviitire wega kumba uye tsananguro yemhando dzakakurumbira - Magic Kegel Master uye kGoal. Verenga
Zvizhinji nezve runako
Chii chinonzi uso primer Face primer: zvazviri uye maitiro ekuishandisa + chiyero chezvakanakisa zvigadzirwa 2019-01-24 15:59:02 Runako Olga Sologub Masikati akanaka, vaverengi veblogi vanodiwa! Unoziva here kuti chii chinonzi uso primer? Ivo vanoteedzera rairo yehunyanzvi hwekugadzira maartist vagara vakaisa ichi chigadzirwa muhombodo yavo yekuzora. Uye kwete ... Verenga
Zvakanakira hyaluronic acid yechiso Ndezvipi zvakanakira hyaluronic acid yechiso: shandisa mu cosmetology uye kumba 2018-08-29 09:21:57 Runako Olga Sologub Chii chinonzi hyaluronic acid yechiso? Ngationei kuti nei hyaluronic-based fillers ichidikanwa, mashandisiro ekirimu uye serum kumba, kushandiswa kwemajekiseni, mesotherapy uye biorevitalization yemakaka, miromo uye nasolabial folds mu cosmetology. Contraindications panguva yekuzvitakura uye zvinoita here kubaya muzhizha. Ongororo yemaitiro uye mapikicha pamberi nepashure. Verenga
Chii chinonzi ozone kurapa kumeso Chii chinonzi ozone kurapa kumeso uye yakawanda sei nzira yekurapa kweganda inodhura? 2018-08-24 14:21:54 Runako Olga Sologub Mhedzisiro inobatsira yeozone paganda yakagara ichishandiswa mune cosmetology. Kubva pane ino chinyorwa iwe uchadzidza kuti ozone therapy ndeyei kumeso ine pikicha kumberi uye shure, mutengo wayo, kuti inobatsira sei pakurapa acne, acne, rosacea, uye neiyo oval yechiso nemutsipa. Ndezvipi zvinopesana, mhedzisiro uye matambudziko. Izvo zvinokwanisika kuishandisa pamba uye panguva yepamuviri, yakawanda sei iyo nzira yemabatiro inodhura? Verenga
Bronzer yechiso nemuviri Chii chinonzi bronzer kumeso nemuviri kune: chii uye danho-nhanho-chirongwa chekushandisa kwayo 2018-08-20 14:05:12 Runako Olga Sologub Radiant ganda chiroto chemusikana wese. Kubva pane ino chinyorwa iwe uchadzidza kuti bronzer yechiso nemuviri chii, ndeyei, nhanho-nhanho dhayagiramu mumifananidzo yekuti ungaishandisa sei nekuishandisa nemazvo neanosimudza, sei kusarudza chigadzirwa cheganda rakajeka , ndeipi iri nani kutenga - hupfu kana mvura, wongororo nemapikicha zvisati zvaitika uye shure kwezviratidzo Clarence, Mac, Dior, Letual nevamwe. Verenga
Nzira dzekuderedza pores Kuongororwa kwezvakanakisa zvipoda uye mishonga yechivanhu kutetepa pores kumeso 2018-04-01 12:17:03 Runako Olga Sologub Kana uchisarudza yakanakisa mushonga wekudzora pores kumeso, iwe unofanirwa kuziva kuti iwe unogona kutenga inoshanda mishonga yekugadzirira kana kugadzirira yakanaka yechinyakare masiki kumba. Inogona kuve cream, cosmetic ivhu kana masiki ane aspirin, mbatatisi uye ndimu, kana huchi. Verenga zvimwe muchinyorwa, uko kwaunowanawo wongororo nemitengo yezvizoro. Verenga
Chii chinonzi kumeso Chii chinonzi chiso chinosimudza uye mashandisiro acho: kudzidza kusarudza nhuvara uye kurishandisa nenzira kwayo 2018-03-31 12:18:51 Runako Olga Sologub Iwe haugone kuwana akakwana maumbirwo pasina anosimudza. Ngationei kuti chii uye kuti tingaishandisa sei nemazvo! Muchinyorwa iwe unowana inhanho-nhanho zano rekuti unganyore sei pachiso chakatenderedza, wongororo yekuti ndeipi iri nani kutenga muchitoro chepamhepo, mitengo uye ratings yezvakanaka zvinojekesa, mapikicha pamberi uye mushure mekushandisa, matipi sei kusarudza mumvuri waunoda. Verenga
Mhoroi, zita rangu ndinonzi Olga. Kutsvaga mapureti ane hutano rwekunaka uye hutano? Wobva wagamuchira kublog rangu. Zvimwe nezvangu
© 1983-2020 Olga Steshkina's blog Kuteedzera zvinhu zvinokurudzirwa chete kana paine chinoshanda chinongedzo ku takioki.ru
Chinja zvakavanzika marongero